Hezvino izvo vanhu vari kutaurwa nevanhu pamusoro penyama yepamusoro | Rayson
Hezvino izvo vanhu vari kutaurwa nevanhu pamusoro penyama yepamusoro
Kubatsira kukuru kwekutanga kweUV kurapa kwekutanga kwekutanga kwekudyara kunodiwa kune iyo UV kupora system, iyo inodhura 80 muzana mapoinzi mashoma pane iyo inopisa yemhepo. Zvimwe zvimwe zvakanaka zvakanakira zvinowedzera zvigadzirwa, chigadzirwa mhando uye zvigadzirwa zvakasiyana. -Kutaura nezve kusunungurwa kwekukuvara kwe-foratle organic compounds (VERCS)
Chokwadi chechinhu ndechekuti kana iwe ukafunga kushambadzira kambani yako, iwe unofanirwa kuve wakangwara mune zvaunosarudza. Iyo logo yaunosarudza kushandisa muhofisi yako haidi kungofananidza kambani yako, asi zvakare kukwezva vatengi vanogona. Icho chauchemo nei uchifanira kuwana LED logos isisiri mhinduro yakakodzera yekushandisa kunze kwechitoro chako, asi zvakare mhinduro yakakodzera yekushandisa mukati.